Soddon gogo 'oo talo ah oo loogu talo galay haweenka guursaday: Waan ogahay in gabdhaha yari aqbali doonin, laakiin kan ku dhaqan gelin doona xeerarkan ayaa noqon doona haweeneyda ugu farxadda badan, wuxuuna sameyn doonaa guri wanaagsan ilaa labada lamaane ay fahmaan mooyee. ma aha
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 23, 2020 12: 11 No Comments
Adiga ayaa go’aaminaya oo eega haddii ay quseyso: Qodobka 1-aad: ninku had iyo goor waa saxsan yahay. Qodobka 2-aad: ninku had iyo goor waa madaxa qoyska xitaa hadii uusan shaqeyn. Qodobka ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 22, 2020 00: 20 No Comments
Dooddu way furan tahay! Ma jiro sawir fool xun oo ka sareeya kan naagta, hooyadi ku kicineysa walaalaheeda iyo gabdhaha walaalaha ah inay necbaan. Gudaha jarjarka, waxaa loogu yeedhaa ...	Akhri wax dheeraad ah
Dooddu way furan tahay! BB, waan gaajoonayaa. Halkaa, waxaad noqoneysaa Barnaamijkeeda Cuntada Adduunka (WFP); BB, Waxaan ubaahanahay 200 kun si aan u furo fagaaraha timaha. Halkaas waxaad ku noqotaa ...	Akhri wax dheeraad ah
Dhaqanka Yoruba: Ma inaan Sii Wadnaa Arooska Ogun iyo Osun? Sida laga yaabo inaad ogaatay, Orisas badan ayaa wada guursaday waqtiyo kala duwan "Waa su'aal kayar fikirka aadanaha ee guurka marka loo eego midowga dhacdooyinka rabbaaniga ah"
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 13, 2020 00: 00 No Comments
Midowga Ogun iyo Osun waa midka guurka ugu yar ee la baaray ee labadan Orisa, laakiin waxay muhiim utahay IFA (ruuxiga ...	Akhri wax dheeraad ah
Sababta aan u go'aansaday inaanaan mar dambe u bixin dumarka cadaawa: waxaan ahay nin Madow / Afrikaan ah oo la baxay dumar madow iyo sidoo kale dumarka cad
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 8, 2020 04: 04 No Comments
Waa kuwan 8da sababood: 1. Ma fahmi karaan dadka Madowga / Afrikaanka ah Haweenka cadaanka ah ee aan aqaanay ma ayan fahmin qibrada Madowga / Afrikaanka ee Galbeedka adduunka. Xaqiiqdi ...	Akhri wax dheeraad ah